Coolpad dị njikere ugbu a ịmalite ekwentị 5G mbụ ya | Androidsis
Coolpad Ọ bụ onye rụpụtara smartphones nke na -adịghị ewu ewu n'ụwa, n'agbanyeghị na ọ na -ewu ewu na India, ahịa nke ọ na -arụ ọrụ na -elekwasị anya. N'ebe ahụ, akara a kwesịrị ka enyocha nke ọma maka ọnụ ọnụ ọnụ ala ọ na -enye, nke anaghị apụtakarị n'etiti asọmpi mana a na -enye ya ndị na -azụ ahịa nwere mmefu ego belatara.
Agbanyeghị, ọ bụghị n'ihi na akọwapụtara ya dịka ụlọ ọrụ nwere smartphones ala-eri ọ pụtara na ọ chọghị ịmalite ekwentị nwere ụdịdị dị elu. O doro anya, emeworị atụmatụ mwepụta ekwentị mkpanaka nwere njikọ 5G, nke, n'ihi njirimara a, ga-eweta, opekata mpe, nkọwapụta etiti. Ọ nwere ike ịbụ ihe zuru oke? Nke a bụ ihe anyị ka ga -achọpụta.
Coolpad na -eme mmegharị ma na -agbanwe atụmatụ ya ka ọ nwee ike idobe onwe ya n'ahịa. Nke ikpeazụ chụrụ osote onye isi ala na onye isi ala Jiang Chao na mbido afọ a, ụbọchị ole na ole ọ pụtara na CES 2019, nke mere na Jenụwarị. Ụlọ ọrụ ahụ họpụtakwara onye isi ọhụrụ maka ogwe aka India ọnwa ole na ole gara aga. Na ihe niile a, o doro anya, bụ nsonaazụ mfu nde ndebanye aha ya n'akwụkwọ n'ọnwa ndị na -adịbeghị anya.
Ihe edeturu ọhụrụ gosiri na onye isi ụlọ ọrụ ahụ, Chen Jiajun, gwara ndị ọrụ ya na ụlọ ọrụ ahụ na -eme atụmatụ oge iji wepụta ekwentị ọhụrụ na Septemba nke afọ a, yana ọ na -achọ ilekwasị anya na ngalaba R&D, iji nye ntụzịaka ọhụrụ maka nsogbu ya ugbu a, nke adịghị mma kpamkpam, mana nke dị iche. A na -arụ ọrụ nkwupụta ụlọ ọrụ ahụ.
O kwukwara na Coolpad na Qualcomm na Mediatek na -akparịta ụka maka ijikọ teknụzụ 5G na ekwentị ha site na chipsets ha. Ụlọ ọrụ ahụ gbakwụnyere na ebumnuche ya bụ itinye ego karịrị nde dollar 500 iji wusie ike ọnụnọ 5G ya na India n'ime afọ ise na -abịanụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Coolpad dị njikere ugbu a ibido ekwentị 5G mbụ ya